I-QYBZ ingumkhiqizi ophethe ngokuphelele ukuhweba kwangaphandle.
Isikhathi Iposi: Sep-28-2021
I-QYBZ ingumkhiqizi ophethe ngokuphelele ukuhweba kwangaphandle. Ngikhiqiza amabheringi ngobuchwepheshe ngamanani aphansi nekhwalithi ephezulu. Inqubo eyisisekelo yokuthwala ukukhiqiza (Gxila enqubeni eyisisekelo yokukhiqizwa kwe-ferrule, okokusebenza yi-high-carbon chromium equkethe insimbi i-Gcr15SiMn) 1. I-bas ...Funda kabanzi »
Inqubo yokugeleza kokusebenza kokusebenza imi kanje
1. UKWAKHA ukucutshungulwa UKWAKHA ukucubungula okuyinhloko kokuthwala ukuqhutshwa kweringi, okwaziwa nangokuthi ukucubungula okungenalutho. Izinhloso eziyinhloko zokwakhiwa kwe-ferrule yilezi: (a) Kutholakale okungenalutho okufana nokwakheka komkhiqizo, ukuthuthukisa izinga lokusetshenziswa kwensimbi ...Funda kabanzi »
Qianyong Ukunikela ～ Professional eziveza umkhiqizi, sicela uxhumane Whatsapp: +8616536352555
Ukusetshenziswa kokusebenzisa: amasondo angaphambili ezimoto, ukuhanjiswa, amasondo angemuva, umehluko wemiphini ye-pinion. Imishini yokwakha, ithuluzi lokuphotha lomshini, imishini emikhulu yezolimo, imoto yesitimela igiya redu ...
Ngingumkhiqizi othwala ovela eChina.
Isikhathi Iposi: May-17-2021
Ngingumkhiqizi othwala ovela eChina. Uma udinga i-SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB Neminye imikhiqizo eyaziwa kakhulu xhumana nami Siyakwamukela zonke izinhlobo zokuthwala ...Funda kabanzi »
Ngingumkhiqizi othwala ovela eChina. Uma udinga i-SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB
Isingeniso Ukunikela Deep inkatho ibhola eziveza: ngaphambili eyaziwa ngokuthi olulodwa irowu osabalalayo ibhola eziveza, kuba esetshenziswa kabanzi kunazo rolling eziveza. Izici zayo ukumelana okungqubuzana okuphansi nesivinini esikhulu. Lapho kutholakala ...Funda kabanzi »
Iyini ibhola elinemijelo ejulile?
Iyini ibhola elinemijelo ejulile? Akuwona wonke amabhere ebhola afanayo. Izinhlobo ezahlukahlukene zemiklamo zenzelwe ukuhlangabezana nezidingo ezithile, ngakho-ke uma ungeyena unjiniyela noma umphakeli (noma ngabe wenza kwesinye isikhathi), akuhlali ...Funda kabanzi »
Ikheli: A-1403-8, isiliva block, West Minghu Road, Tianqiao District, Jinan City, Isifundazwe Shandong